Pannzagar: မမြဲနိုင်သေးတဲ့ လက်တစ်စုံ
Feelings, Memories, Personal |
This entry was posted on 10:57 PM and is filed under Feelings , Memories , Personal . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
On 11:44 PM , Dream said...
ဆရာကောင်းတပည့် ပန်းကောင်းပန်တဲ့ ဦးဦး....
ဆရာ့ကျေးဇူးတရားကို သိတတ်တဲ့ ဦးဦး....တပည့်ကောင်းတစ်ဦး...ဆရာဂုဏ်ရည်ကို ဖော်ကျူးပေးတဲ့ဦးဦး....ဆရာသိရင် ၀မ်းသာမှာပါ...
(ဖလားဖလား တော်သေးတာပေါ့...ခုတော့ မ၆ တော့ဘူး..ခစ်ခစ်..)
မစရတာ ကြာလို့ အားရပါးရ နောက်တာ...ဟိဟိ...း)
On 3:05 PM , thinzar said...
တစ်ခုခုကို မြဲမြဲကိုင်ပါ ....
ရည်ရွယ်ချက်မရှိမျောနေတာထက် သာပါတယ် ...
( ဟုတ်လားတော့မသိဘူး ပြောချလိုက်ပီ ... )
On 8:07 AM , Unknown said...
On 8:20 AM , Unknown said...
On 7:13 PM , စိတ်စမ်းရေ said...
On 10:50 PM , မေအိခင်(လယ်ဝေး) said...
ပန်းစကား ရေ ဆရာဦးစိုးညွန့် က စာပေဝေဖန်ရေးဆရာဖြစ် တဲ့ဆရာစိုးမြင့်လတ်လား
သူ့ သားက ရန်နောင်ဦးလေ -ဟန်သစ်မှာ အယ်ဒီတာလုပ် ဖူးတယ် လေ ။ သီချင်းတွေကဗျာတွေလည်းရေးတယ် ။
ဟုတ်တယ်ဆို ကျမ ဆရာပဲမို့ ပါ ။။
On 10:30 PM , ဝေလေး said...
ဒီပို့စ်လေးခုမှဖတ်မိတယ်။ မှတ်သားစရာတွေပဲ.. တစ်ခုခုကိုပြင်းပြင်းပြပြဆန္ဒရှိရမယ်ဆိုတာ သိနေပေမယ့် ယောင်ချာချာဖြစ်နေမိတုန်းပဲ....
On 10:45 PM , စံပယျဖွူ said...